Fikarohana momba ny firaisana Ny herin'ny fanahy: ny kambana dia novonoina ary avy eo nipoitra indray ny kambana indray - ny fanombanana ny planeta sy ny fiainana lava niainan'ny Tripathi Twins sy ny Ramoo ary ny Rajoo - Ny fikarohana momba ny vatana
Ny herin'ny fanahy: ny kambana dia novonoina ary avy eo nodiany indray ny Twins indray-ny fanombanana ny planeta sy ny fiainana lava niainan'ny Tripathi Twins ary ny Ramoo sy Rajoo
Ahoana no nahatonga azy: Fahatsiarovana ny fiainana teo aloha tamin'ny fahazazany
mpikaroka: Ian Stevenson, MD, Erlander Harraldsson, PhD ary LP Mehrota, PhD
From: Ireo trangan-javatra momba ny fitondran-tenan'ny vatana vaovao, Boky I, Inde, nataon'i Ian Stevenson, MD (pejy 337-360)
Ny fiainan'i Bhimsen sy Pitamah
Ny zaza kambana Tripathi, Bhimsen sy Pitamah, dia teraka tao amin'ny tanànan'i Uncha Larpur ao amin'ny fanjakana Indiana Uttar Pradesh, tamin'ny 1935. Ny rainy dia Pandit Kali Shanker, tantsaha iray, ary ny reniny dia Ram Devi no nantsoina. Ny kambana dia nanana zokilahy lahy iray antsoina hoe Chandra. Ny fianakaviana dia Brahmins, kilasy ambony indrindra na kilasy sosialy amin'ny kolotsaina Indiana. Ny kambana dia mifanakaiky tokoa ary niara-nandeha tamin'ny toerana rehetra.
Bhimsen no kambana manan-tsaina kokoa, izay nandroso tamin'ny fianarany hatramin'ny kilasy fahenina. Rehefa nahay namaky teny sy nanoratra izy, tamin'ny naha olon-dehibe azy, dia niasa tapa-potoana ho sekretera tao amin'ny tanànan'i Uncha Larpur izy. Bhimsen dia noheverina ho mahery setra kokoa amin'ireo ankizilahy.
Mifanohitra amin'izany kosa, noheverina ho tsotra kokoa i Pitamah. Tsy nianatra mihitsy izy.
Na dia samy kambana aza izy roa ireo, dia fantatra fa matanjaka, matanjaka izy ireo ary tsy miady amin'ny ady rehefa tezitra. Nasiany basy nomena fahazoan-dalana tao an-tranon'ny reniny, Ram Devi, izay nahantona teo amin'ny hazo fisaka teo amin'ny rindrina.
Tahaka ny rainy, Bhimsen sy Pitamah dia mpamboly, miaraka amin'ny zokiny lahy, Chandra. Rehefa maty ny rainy dia nanambara ny sitrapony fa hisara-bazana mitovy amin'ny zanany telo ny taniny.
Bhimsen dia nanambady voalohany ary nanana ankizy 3. Pitamah dia nanambady herintaona taty aoriana ary nanan-janaka iray.
Ny famonoana an'i Bhimsen sy Pitamah
Tamin'ny 1964, raha vao niforona ny 40 taona ireo kambana, dia nisy fifamahofahan'olona teo anelanelan'izy ireo sy ny lehilahy antsoina hoe Jagannath sy Raja Ram, izay nonina tao Kurri, mpifanolo-bodirindrina 1, na tokony ho iray kilaometatra miala an'i Uncha Larpur.
Jagannath dia nanamboatra lakandrano tany amin'ny tany izay heverin'ny kambana ho azy manokana. Ho valifaty, dia nandondona ny dian-tongotra ireo kambana ary avy eo dia nanondraka renirano iray izay nanondraka tany an'i Jagannath sy Raja Ram.
Jagannath sy Raja Ram dia nanamboatra valifaty tamin'ny kambana. Nolazain'izy ireo fa namela ny helok'i Bhimsen sy Pitamah izy ireo handrava ny alany ary hanakana ny renirano izay nanondraka ny taniny. Teo ambany fialan-tsasatry ny fananganana raharaha ara-bola samihafa, dia nanasa ireo kambana tany an-tranon'i Jagannath, any Kurri, tanàna akaiky azy, i Jagannath sy Raja Ram.
Rehefa tonga ny Bhimsen sy Pitamah, dia naneho fitiavan-tena ny tompon'izy ireo ary nanome ny ronon-janak'izy ireo hosotroina. Tampoka teo, nisy lehilahy maromaro niditra tao amin'ilay efitra ary nanafika ny kambana. Voalohany, nanipy ranon-javatra mampidi-doza izy ireo, mety ho asidra, eo imason'ireo kambana hampahiratra azy ireo.
Nofehezin'izy ireo avy eo ny kambana tamin'ny fatotra azy ireo tamin'ny tady. Raha teo amin'ny tany ny kambana, nanery ny tratrany sy ny kibony tamin'ny tehina hazo ireo lehilahy. Polisy napetraka namaky ny vozon'ilay kambana no nampiasaina hanakendana azy ireo.
Ny vatan-dehilahy Bhimsen sy Pitamah dia natsipy ho tsara
Ireo mpanafika dia nandroaka ireo kambana, Bhimsen sy Pitamah, izay mbola voafatotra tamin'ny tady, tao anaty lavadrano iray. Ny kambana farany dia hita tamin'ny April 28, 1964.
Efatra andro taty aoriana, tamin'ny May 2, 1964, dia hita tao amin'ny fantsakana ireo vatana mangatsiaka ireo kambana. Ny mpitandro filaminana izay nisintona ny vatana tamin'ny lavadrano dia nanapa-kevitra fa ireo kambana dia novonoin'ny tsindry. Tamin'ny fotoana nanaovana fanitsiana, ny vatana, izay nipoitra tamin'ny hafanana tany India, dia lava loatra loatra noho ny antony nahafatesan'ny mpitsabo.
Ireo kambana, Bhimsen sy Pitamah, no nihevitra fa novonoina na tamin'ny Aprily 28, 1964. Jagannath dia tokony ho 45 taona taonany rehefa namono ireo kambana ireo.
Vonona ny tsy hahazo ny fijoroana vavolombelona sy ny porofo ireo mpamono olona, ​​ary miderà ny asany
Nosamborin'ny polisy ny fahavalon'ny Bhimsen sy Pitamah fantatra 9, izay niatrika fitsarana noho ny famonoana ireo kambana. Satria ireo voampanga 9 ireo dia mety handray anjara amin'ny famonoana olona, ​​tsy misy mijoro ho vavolombelona amin'ny tsirairay. Noho izany, tsy nisy vavolombelona mandaitra na porofo hafa, navotsotra ireo voampanga 9 ary nafahana.
Namporisihina sy nalahelo noho ny fanafahana azy ireo, nanomboka niresaka momba ny heloka nataony ireo mpandray anjara tamin'ny famonoana an'i Bhimsen sy Pitamah. Niaiky izy ireo fa nanipy ranon-javatra mampidi-doza teo imason'ireo kambana izy ireo. Nasehony koa fa nampiasa hazo hazo izy ireo mba haka ny vatan'ny kambana eo amin'ny tany. Ny biriky hazo dia nampiasaina avy eo hanipika ny tendrony Bhimsen sy Pitamah mba hanemorana azy ireo. Nirehareha ireo mpamono ireo avy eo ny nanipy ny vatan'ireo kambana ho lavadrano.
Bhimsen sy Pitamah Reincarnate toy ny setrin'ny ambiny roa-Ramoo sy Rajoo
4 volana vitsivitsy taorian'ny nahafatesan'i Bhimsen sy Pitamah, tamin'ny volana 1964, kambana maromaro hafa no teraka tao Sham Nagara, izay 16 kilometatra na manodidina ny 10 kilaometatra avy amin'i Uncha Larpur, ny fiainan'i Bhimsen sy Pitahmah taloha. Nisy lalana iray nalaina teo anelanelan'ny vohitr'i Uncha Larpur sy Sham Nagara, izay mety ho tratran'ny toetrandro tsara.
Sham Nagara dia 100 teo ho eo monja ny mponina tao. Pan Ram Swaroop no rain'izy mirahalahy kambana ary Kapuri no anarany.
Famelabelarana ny nofy mikasika ny ankizy roa
Kapuri dia nanana nofy 2 talohan'ny nahaterahan'ny zanany kambana, izay nahitana zaza 2. Na dia tsy nametraka lanja firy aza i Kapuri tao anatin'ireny nofinofy ireny, dia mety nanambara mialoha izy ireo fa hanana kambana izy.
Ramoo sy Rajoo dia te-handeha any amin'ny tranony taloha, Uncha Larpur
Nantsoin'ny ray aman-drenin'izy ireo ny kambana Ramoo sy Rajoo. Raha vao 2 taona izy ireo, dia nanomboka niteny tamin'ny fomba voalamina izy ireo.
Tamin'ny filazana voalohany nahatsiaro ny fiainany taloha, dia nihazakazaka nankeny amin'ny làlambe lehibe tao an-tanànany i Ramoo sy Rajoo. Rehefa nentina tany an-tranony izy ireo, dia nanontany ny ray aman-dreniny ny antony nandosiran'izy ireo. Ny kambana dia namaly fa niezaka ny hody any an-tranony izy ireo. Ireo kambana dia naneho faniriana mafy ny hankany amin'ny Uncha Larpur alohan'ny hilazan'izy ireo ny momba ny fiainany taloha.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha dia atolotry ny faneken'ny Twin momba ny olom-pantany avy amin'i Uncha Larpur
Tamin'ny faha-3 taonany, ireo zaza kambana, Rajoo sy Ramoo dia nahita lehilahy iray avy ao amin'ny tanànan'i Uncha Larpur antsoina hoe Shiv Narain. Nikasika ny tongony ireo zaza kambana ireo ho mariky ny fanajana. Ny dadatoan'izy mirahalahy dia nanafay azy ireo tamin'ity fihetsika ity tamin'ny olon-tsy fantatra. Namaly izy ireo fa nahafantatra ity lehilahy ity tamin'ny fiainany taloha tany Uncha Larpur.
Ny fanekena an'io lehilahy io dia nanentana ny fahatsiarovana ny fiainan'ny kambana. Raha miresaka momba ny fahoriany efa lasa, dia matetika i Rajoo sy Ramoo no miresaka. Rehefa nanomboka nanao fanambarana ny iray, dia tapitra ilay sazy. Noho izany dia sarotra matetika ny nanavaka izay nolazain'ny kambana.
Ny fiainan'ny maty
Ramoo sy Rajoo dia nanao izao fanambarana manaraka izao momba ny fiainany taloha nahatsiarovany an'i Bhimsen sy Pitamah:
Nilaza i Rajoo sy Ramoo fa ny fiainany taloha dia ny anarana Bhimsen sy Pitamah. Raha ny tena izy, nilaza i Ramoo fa Bhimsen no anarany, raha nanambara i Rajoo fa i Pitamah no anarany.
Na Pitamah | I Rajoo dia noheverina ho kambana tsy dia marani-tsaina tamin'ny androm-piainany roa, Rajoo no nanolotra ny antsipiriany indrindra tamin'ny fiainan'ny zaza kambana.
Nilaza ireo kambana ireo fa tao anatin'ny fahatanorany lasa teo dia nanana rahalahy antsoina hoe Chandra izy ireo ary nipetraka tany amin'ny tanànan'i Uncha Larpur.
Nilaza ireo kambana fa efa nianatra hatramin'ny kilasy fahenina izy ireo tamin'ny mpampianatra iray antsoina hoe Thakur Tilak Singh, any amin'ny tanànan'i Marhana. Ireo fanambarana ireo dia marina ho an'i Ramoo, izay Bhimsen tamin'ny fiainana taloha.
Ny kambana dia nilaza fa ny iray tamin'izy ireo dia nanambady ankizivavy iray avy ao Bahawalpur ary ny iray kosa nanambady vehivavy avy ao Atrauli. Bhimsen | Tena nanambady vehivavy iray avy any Bahawalpur i Ramoo, fony i Pitamah | Rajoo dia nanambady ankizivavy iray avy ao Atrauli.
Nilaza ireo kambana ireo fa ny iray tamin'izy ireo dia nanan-janaka atao hoe Netra Kishore, izay marina ho an'ny Bhimsen | Ramoo.
Nilaza ireo kambana ireo fa ny anankiray tamin'izy ireo dia nanana zanaka antsoina hoe Drona, fohy ho an'i Dronacharya, izay marina ho an'ny marina momba an'i Pitamah | Rajoo.
Ny kambana dia nilaza fa izy ireo dia nanana 60 bighas avy amin'ny tany (misy manodidina ny 7 bighas amin'ny acre), izay tena marina tokoa ny habetsahan'ny tany Bhimson sy Pitamah nanana.
Nilaza izy ireo fa ny iray tamin'izy ireo dia nanao peratra iray, izay marina momba an'i Bhimsen | Ramoo.
Nilaza ireo kambana fa nanana basy nomerika izy ireo. Ankoatr'izay dia nilaza i Rajoo fa napetraka teo amin'ny rindrina teo amin'ny rindrina iray tao amin'ny efitranon'ilay reniny, Ram Devi, ilay basy. Nanampy i Rajoo fa nihazona teo amin'ny rindrina akaikin'ny basy ihany koa ny fehikibo miaraka amin'ny bala. Ireo fanambarana ireo dia marina, satria ny basy sy ny fandefasana ny cartridge an'i Bhimsen sy Pitamah dia notazonina tokoa tao amin'ny efitranon'ny renin'i Ram Devi.
Rajoo sy Ramoo Tsarovy ny famonoana ho faty ny fiainany taloha
Rajoo no kambana voalohany niresaka momba ny famonoana ho faty teo aloha, tamin'ny filazàna fa namono an'i Jagannath, mpitarika ny tanàna tao Kurri, niaraka tamin'ny namany Raja Ram, namono ny kambana tamin'ny fiainany taloha.
Rajoo dia nilaza fa tamin'ny fiainany taloha dia nandravona ny ampaham-pitoviana izy ireo izay nanondraka ny saha natolotr'i Jagannath sy Raja Ram.
Nilaza i Rajoo fa tezitra i Jagannath tamin'ny voalohany ny amin'ny famotehana ny lakandrano, nefa lasa sariaka izy avy eo. Rehefa nasaina tany an-tranon'i Jagannath any Kurri ireo zaza kambana. Nilaza i Rajoo rehefa tonga izy ireo dia nandroaka ireo vehivavy tao an-trano i Jagannath. Nilaza i Rajoo fa tia an'ireo kambana i Jagannath tamin'ny voalohany ary nampisotroiny ronono an'i Bhimsen sy Pitamah.
Rehefa nanomboka nisotro ny ronono izy ireo dia voahodidin'ny vondron'olona iray naka azy ireo. Nanampy i Rajoo fa nanipy ranon-javona ny masony mba hijery azy ireo. Ireo lehilahy nanafika ary avy eo dia nafatony tamin'ny tady ny kambana.
Rajoo dia niteny fa ny rahalahiny taloha, Bhimsen, dia niala tamin'ny tady ary nandositra niala ny trano, fa niverina rehefa nahatsapa i Bhimsen fa ny rahalahiny Pitimah | Rajoo, dia mbola tao an-trano ary novonoina. Nanampy i Rajoo fa nantsoina hoe Hori Lal ny iray hafa.
Ireo fanambarana momba ny famonoana olona kambana ireo dia marina, mifototra amin'ny zavatra nolazain'ireo mpamono olona tamin'ny hafa taorian'ny nanafahana ny fitsarana azy ireo. Tadidio fa nisy lehilahy 9 niatrika fitsarana tamin'ny famonoana ireo kambana, anisan'izany i Jagannath, Raja Ram ary Hori Lal.
Nanampy i Rajoo fa izy ireo, ny fiainam-pianakaviana taloha, dia napetraka tao anaty kitapo ary natsipy tao anaty lavadrano. Ian Stevenson dia nanamarika fa rehefa hita tao anaty fantsakana ireo vatana dia tsy tao anaty lasaka izy ireo. Nieritreritra i Stevenson fa azo atao ny manafina ny kitapo mba hanafina ny vatana raha vantany vao nentina avy tao an-tranon'ny Jagannath tao Kurri izy ireo ka tonga teo amin'ilay toerana fantsakana.
Ny ankamaroan'ny lasaka ao amin'ny faritra, ampiasaina amin'ny fitaterana vokatra, dia manana ny anaran'ny tompony printy amin'izy ireo. Amin'ny fametrahana ny vatan'i Bhimsen sy i Pitamah, ilaina ny manaisotra ireo saobà mba hisorohana ny fanavakavahana.
Ny kambana dia nanohy niresaka momba ny fiainany taloha farafaharatsiny hatramin'ny 9 taona.
Ny ray aman-drenin'ny kambana dia nanery an'i Ramoo sy ny fahatsiarovan'i Rajoo ny fiainana taloha
Ny ray aman-drenin'i Ramoo sy Rajoo dia tsy nanandrana nanamarina ny fahatsiarovan'izy ireo ny kambana taloha ary tsy nitondra azy ireo tany Uncha Larpur, satria misy finoanoam-poana any avaratr'i India izay naminavina fahantrana lehibe ho an'ireo ankizy mahatadidy ny fiainana taloha. Anisan'ny vokatr'izany ny hoe ho faty tanora ireo ankizy ireo. Araka izany, ny ray aman-dreny dia mamehy ny fahatsiarovana ny fiainana taloha momba ny fiainana amin'ny famoretana malefaka na amin'ny sazy ara-batana aza, toy ny kapoka ilay zaza.
Ny ray aman-drenin'i Ramoo sy Rajoo dia nihevitra fa mety ny mikapoka ny kambana isaky ny manomboka miresaka ny fiainany teo aloha izy ireo. Rehefa tsy mandeha izany dia nivadika tamin'ny fangatahana kely kokoa izy ireo mba tsy hiresahan'ny ankizy ny momba ny nofo taloha tany ivelan'ny fianakaviana. Ankoatr'izay, ny ray aman-drenin'izy ireo kambana ary nilaza tamin'izy ireo mba handà ny fitadidiana ny fiainana taloha raha misy olon-tsy fantatra manontany. Naningana izy ireo tamin'ny resadresaka nifanaovan'i Ian Stevenson
Ny antony iray hafa nanesoran'ny ray aman-drenin'i Ramoo sy Rajoo ny fahatsiarovan-dry zareo tamin'ny fahatsiarovana ny zanany taloha dia ny ahiahin'ireo namono ny fiainam-bolana lasa izay dia afaka nanakana sy nanisy ratsy an'i Ramoo sy Rajoo hanafoanana ny fijoroana vavolombelona momba ny vono olona.
Ramoo sy Rajoo dia mamantatra tsy tapaka ny fiainany taloha Neny sy Rahalahy
Ny fanamarinana ny fahatsiarovana ny fiainana taloha kambana dia nitranga rehefa nandre momba ny fiainana lasa an'i Ramoo sy Rajoo ireo izay nahalala an'i Bhimsen sy Pitamah. Ohatra, Ram Devi, ilay reny taloha, dia nahita ireo rahalahy teraka tao amin'ny vatana vaovao indray tao Sham Nagara. Nahita azy i Ramoo sy Rajoo ary nahita izy roa kambana sy Ram Devi nitomany rehefa nihaona.
Ny zokin'i Bhimsen sy Pitamah, Chandra, dia tonga mba hijery an'i Ramoo sy Rajoo, izay fantatr'izy mirahalahy koa fa nahita. Raha ny marina, Chandra dia loharanom-panamarinana voalohany momba ny fahatsiarovana ny fiainana taloha ny zaza kambana.
Ramoo sy Rajoo no miatrika ny famonoana olona ho faty
Tahaka ny tahotry ny ray aman-dreniny, maro tamin'ireo lazaina ho mpamono no tonga tany Sham Nagara mba hihaona tamin'i Ramoo sy Rajoo, izay nahafantatra ireo kambana. Stevenson dia nanombantombana fa ireo mpamono dia tokony ho voakiana noho ny fiarahan'ny fahalianana sy ny fanahiana. Tsy afaka nahazo vaovao momba ny fiverenan'i Ramoo sy i Rajoo sy ireo mpamono azy taloha i Stevenson, saingy nanamarika i Stevenson fa tsy nahafinaritra izany.
Ny fiainana fihetsika sy ny fahaiza-miaina
Ramoo noheverina ho kambana mahira-tsaina kokoa. Mifanohitra amin'izany, i Rajoo dia noheverina ho tsotra. Izany dia mifanaraka amin'ireo natoron'ny fiainana roa-polo, toa an'i Bhimsen | Ramoo dia nahira-tsaina ary nandeha tany an-tsekoly, izay nianatra namaky teny sy nanoratra. Pitabah | Rajoo, etsy ankilany, tsy nianatra mihitsy. Mahaliana fa ilay kambana izay heverina ho malina, Rajoo, dia olona iray izay nahita voalohany fahatsiarovana ny fiainana.
Niaraka tsy tapaka i Ramoo sy Rajo, toa an'i Bhimsen sy Pitamah, ary nifankatia izy ireo. Ny iray dia tsy mihinana raha tsy misy ny iray hafa koa mba hizara ilay sakafo. Raha nisy kambana iray nandeha irery, ny iray kosa niantso azy hiverina.
Ramoo sy Rajoo koa dia nanana fironana hiatrika toe-javatra mahery vaika, toy ny nataon'i Bhimsen sy Pitamah. Ohatra, rehefa nisy olona ambany, izay nahalala an'i Bhimsen sy Pitamah, nandeha avy tany Uncha Larpur nankany Sham Nagara nihaona tamin'ireto kambana teraka indray, ity olona ambany ity dia naneso ny kambana momba ny faharesen'izy ireo tamin'ny adin'ny fiainana taloha. Tezitra i Ramoo sy Rajoo ary nirohotra nankeny amin'ilay mpanohitra azy ary niantso hoe: “Andriamanitra efa nanao kely, fa mbola azonay nohanina ihany ianareo.”
Fihetsiketsehana iray hafa izay nanehoan'ireo tanora kambana bado raha nisy mpanohitra iray avy any Uncha Larpur tonga tao Sham Nagara mba hihaona amin'ireo rahalahy. Niaiky i Ramoo sy i Rajo io olona io, izay toa niainany tamin'ny fiainana taloha.
Ramoo dia nihazakazaka tamin'io olona io ary niantsoantso hoe: "Fa maninona ianao no tonga eto?" Namaly tamin'ny fanamarihana manevateva ilay mpitsidika ary avy eo dia naka biriky hitsena ilay mpitsidika i Ramoo, saingy nisy olona niditra an-tsambo ary nanakana an'i Ramoo tsy hanomboka ity fitaovam-piadiana ity. Tsarovy fa Bhimsen | Ramoo no mahery setra kokoa noho ireo kambana taloha, mampiseho parallèle amin'ny temimam-panahy.
Ramoo sy Rajoo dia mihaona amin'ireo zana-bolana niainany ary manao asa an-terivozona
Rehefa nifankahita tamin'ireo zandriny tanora zandriny ireo zanany kely taloha, dia nifamotoana izy ireo.
Ny zanak'izy ireo taloha dia nantsoin'ireo kambana teraka tao amin'ny vatana vaovao ho "zanakalahy". Nilaza koa izy ireo fa ny zanakalahin'i Bhimsen dia tokony hitsidika tsindraindray ny tanàna nahaterahan'ny vadin'i Bhimsen.
Rehefa nilazan'ireo zanany lahy taloha ny zana-kilaomin'ny vatana, dia nanjavona ny tranon'izy ireo taloha ary nanjary fihenam-bidy izy ireo, nanoro hevitra ny zanany lahy efa ela niainana izy ireo mba hanamboarana ilay trano amin'ny fikarakarana sahaza azy.
Fiainana any an-tokantrano
Ramoo sy Rajoo dia nahitana pigmented or dark streaks, manodidina ny 2 milimetatra ny sakany, izay nihazakazaka nihodina teo amin'ny akanjony ambany sy ambany. Manana marika 5 i Ramoo, raha manana marika 2 i Rajoo. Ny renin 'izy ireo, Kapuri, dia nilaza fa ireo tsiranoka maizina sy mahitsy ireo dia efa teraka hatramin'ny nahaterahany.
Ian Stevenson nihevitra fa noho ireo tady nampiasaina hanamboarana an'i Bhimsen sy Pitimah ireo marika ireo. Amin'ny ankapobeny, ireo mari-pamantarana ireo dia mety ho vokatry ny biriky nampiasaina hanindriana ny Bhimsen sy Pitimah hanohitra ny gorodona ary hahatsiaro ny kambana.
Ian Stevenson, MD dia mamaritra ny Fianakaviana ao amin'ireny fasana vaovao ireny
Stevenson dia nanamarika fa ny tanàna kely misy ny andriambavilanitra, Uncha Larpur, ary ny an'ireo kambana mbola teraka, Sham Nagara, dia 10 kilaometatra fotsiny, dia hitany fa tsy misy fifandraisana ara-tsosialy na fifandraisana eo amin'ny fianakaviana roa alohan'ny Ramoo sy Rajoo nanomboka niresaka momba ny fiainany taloha.
Chandra, zokin'i Bhimsen sy Pitamah zokiny, dia nilaza tamin'i Stevenson fa tsy mbola tany Sham Nagara izy na ny fianakaviany talohan'ny nahaterahan'ny fahatsiarovana ny fiainan'i Ramoo sy Rajoo, ary tsy nanana namana na fianakaviana ao Sham Nagara izy ireo.
Amin'ny ankapobeny, Ian Stevenson dia namintina fa tsy nanana fomba hahafantarana an'i Bhimsen sy Pitamah amin'ny fomba mahazatra i Ramoo sy Rajoo.
Fitsipika momba ny zafikelin'i Nersônina sy ny fahatakarana ny fiainana teo aloha
FAMPIANARANA SY FIVORIAM-BOLA novolavola tamin'ny alalan'ny fanambadiana: Ireo zafikelin'i Bhimsen sy Pitamah dia nanjary indray niorina tamin'ny raim-pianakaviana Ramoo sy Rajoo. Ireo tranga ireo dia maneho ny fahaiza-manaon'ny fanahy hanomanana drafitra ho amin'ny fiainana ho lasa olom-bitsy.
Toeram-ponenana mifandray amin'ny fiainana taloha: Ian Stevenson dia nihevitra fa ireo tsipika mitongilana maromaro izay teraka tao Ramoo sy Rajoo tamin'ny vata sy ny taolam-paty dia nahitana marika vita tamin'ny tady nampiasaina hanamboarana an'i Bhimsen sy Pitamah, na ireo baoritra nampiasaina hanongotra azy ireo amin'ny tany.
Fanahy Masina ao amin'ny Firaisana ara-nofo any am-parany: Ny renin'i Ramoo sy Rajoo, Kapuri, dia nanonofy talohan'ny nahaterahan'izy ireo izay nahatafiditra zaza roa, mety ho tandindon'ny fahaterahan'ny kambana aminy. Toa avy amin'ny tontolon'ny fanahy, Bhimsen sy Pitamah izay nanambara fa hateraka indray izy ireo amin'ny maha zanak'i Kapuri azy ireo.
Fiverenana ny fisandratana na fiverenana mivantana: Ramoo sy Rajoo dia teraka monja taorian'ny volana 4 taorian'ny nahafatesan'i Bhimsen sy Pitamah. Raha ny fanahy no tafiditra ao anatin'ny dingan'ny fitondrana, izay inoako fa marina, dia ny fanahin'ny Bhimsen | Ramoo sy Pitamah | Rajoo dia nanangona vatana roa isaky ny mandeha.